Mayelana NATHI - China Construction Machinery Import & Export Co., Ltd.
I-China Construction Machinery Import & Export Co, Ltd. ingenye yabathumeli abahamba phambili baseChina bemishini ethekwini, etholakala eXuzhou City. Selokhu kwasungulwa inkampani ngo-2011, besilokhu sigxile ethekwini imishini emakethe. Ngo-2012, thina wabambisana XCMG ukuthuthukisa ngempumelelo ccmie brand ohlangothini Loader crane. Ngemuva kwemizamo eqhubekayo yonjiniyela nokuqalwa kwezinto okuqhubekayo kwezobuchwepheshe, lo mkhiqizo uqhubeka unconywa ngamakhasimende avela kuwo wonke umhlaba, futhi isabelo sawo semakethe eChina naso sibalwa kuqala.
Ngasikhathi sinye, siphinde sibe yi-ejenti egunyaziwe yokuphathwa kwesitaki nesiphathi seziqukathi seZPMC, umkhiqizi wemishini ethekwini nemishini enkulu kunazo zonke emhlabeni.
Asigcini ngokuvumela amakhasimende amaningi aphesheya ukuthi aqonde futhi aqaphele imikhiqizo yethu, kepha futhi sakha ubungane kancane kancane namakhasimende emishini ethekwini emhlabeni wonke.
Ngeminyaka eminingi yokuhlangenwe nakho okucebile, sithole ulwazi lobuchwepheshe oludingekayo kanye nesipiliyoni esihle kakhulu emkhakheni wemishini yetheku. Ngemuva kweminyaka yokusebenza kanzima, namuhla sisemi phakathi kwabancintisana nabo abaningi emhlabeni jikelele. Uhlelo lokusebenza oluhleleke kahle, oluphethwe ngobunyoninco kanye nethimba lezentengiselwano lomhlaba wonke elisebenza kahle lisenza sikwazi ukuguqula ama-oda abe yimikhiqizo yokugcina futhi siyithumele emazweni kanye nasezifundeni ezingaba ngama-60 emhlabeni jikelele.
IShanghai Zhenhua Heavy Industry (Group) Co, Ltd. (ZPMC) ibhizinisi elaziwa kakhulu embonini yokukhiqiza imishini esindayo. Yinkampani ephethwe nguhulumeni ephethe u-A no-B-share ohlwini. Iqembu elilawulayo yiChina Communications Construction Co., Ltd., enye yezinkampani ezihamba phambili emhlabeni ezingama-500. Owandulelayo wenkampani kwakunguGongmao Shipyard, eyasungulwa ngo-1885. Ngemuva kweminyaka engaphezu kwekhulu yentuthuko, yaqanjwa kabusha ngokusemthethweni ngokuthi iZhenhua Heavy Industry ngonyaka ka-2009. Le nkampani izinze eShanghai, futhi inezisekelo eziyi-10 zokukhiqiza eShanghai, eNantong nakwezinye izindawo. izindawo, ezihlanganisa indawo ephelele ye-10,000 mu, enogu oluphelele lwamakhilomitha ayi-10, lapho ugu lwamanzi ajulile amakhilomitha ama-5 nedokodo elithwala umthwalo lingamakhilomitha ama-3..7. Ingumkhiqizi wezwe nosomhlaba omkhulu kunabo bonke bemishini esindayo yemishini yetheku. Le nkampani inemikhumbi ephelele yokuthutha engamathani angama-25 60,000 kuya ku-100,000, ekwazi ukuhambisa imikhiqizo emikhulu olwandle nasolwandle iye emhlabeni.
IShanghai Port Machinery Heavy Industry ibilokhu ithuthukisa ukufinyelela kwezitaki kusukela ngo-2010
Ukuthunyelwa eceleni okulenga e-Oceania Imikhiqizo ye-crane eseceleni eyenziwe yinkampani yathunyelwa ngempumelelo endaweni yomsebenzi yomsebenzisi ePapua New Guinea e-Oceania. Le nkampani yathuthukiswa ngoSepthemba 2013 ngesisekelo sokujula kokugaya nokumuncwa kobuchwepheshe obuphambili bokuphakanyiswa kohlangothi ekhaya nakwamanye amazwe. Iloli lilayishwa eceleni futhi lilayishe ama-semi-trailer, akhiwe nge-semi-trailer engu-371HP kanye ne-MQH37A eseceleni elayishayo futhi ethula i-crane. Ifanele ukulayishwa okweqile nokulayishwa kwemishini yokuphakamisa iziqukathi ezingama-20 no-40.
NgoNovemba 20, 2015, i-China China Machinery Industry Science and Technology Ceremony 2015 yabanjelwa eNanning. I-crane eseceleni ye-MQH37A iwine umklomelo wesithathu we-China Machinery Industry Science and Technology Award. I-crane yokuqala esekwe ezimotweni ezihamba phambili yasuswa ngempumelelo kulayini wokukhiqiza ngo-2015. Amagunya obunikazi angama-38 agunyaziwe, kufaka phakathi amalungelo obunikazi bokusungula ayi-9 agunyaziwe, amamodeli wokusiza angama-28, kanye nokuklanywa kokubukeka okukodwa. Iphrojekthi ye- "Container Transporter Lifting Device ne-Container Transporter" ithole umklomelo wegolide wamalungelo obunikazi wokusungula, okukhombisa amandla aqinile wobuchwepheshe nokuncintisana.
IShanghai Zhenhua Heavy Industry Group isungule iSigaba Sokusakaza Imishini ngo-2016, futhi imikhiqizo eyenziwe lula eyenziwe yaziwa emhlabeni wonke.
IZhenhua Heavy Industry isungule amagatsha noma amahhovisi angama-27 aphesheya kwezilwandle. Lezi zinkampani ezingaphansi zisuselwe endaweni yasendaweni, zenza ukuphathwa okwenziwe endaweni, zifeze izibopho zomphakathi, zenze izinsizakalo zokulungisa ngemuva kokuthengisa, kanye nentuthuko yezimakethe.
NgoJuni 15, 2017, iZhenhua Heavy Industry Port Machinery Group neNkampani yeMedithera basayine inkontileka yokuhlinzekwa kwesitaki, okufaka ukuthengiswa kokuqala kwezilwandle kwemikhiqizo yokufinyelela kweZhenhua Heavy Industries. Umtshalizimali weNkampani iMedithera yiTurkey Potunus Company, enokunothile kokuqashisa nokusebenza kokuthengisa nokuhlangenwe nakho kwesondlo emkhakheni wemishini yemishini ethekwini encane njengokufinyelela kwezitaki. Esigabeni sokuqala, inkampani yathumela ithimba lobuchwepheshe ukuyohlola isizinda sokukhiqiza seShanghai Port Imishini Esindayo kanye nemikhiqizo yeZhenhua Heavy Imboni eNanhui, futhi ukuxhumana nabachwepheshe beZhenhua Heavy Industry ngokuningiliziwe. Ukuhlolwa okuhle kwanikezwa isitaki seZhenhua Heavy Industry. Ngaleso sikhathi, lesi sitaki sokufinyelela sizoqashiswa yinkampani emachwebeni nasemagcekeni okugcina eTurkey nasezindaweni ezizungezile.
NgoJuni 20, 2017, iZhenhua Heavy Industry neNovorossiysk NUTEP Inkampani yaseRussia zisayine ama-quay cranes ama-3, ama-cranes ama-4 ama-cranes, nama-2 we-ZPMC asanda kuthuthukiswa.
Ukukhiqizwa nokuthengiswa kukaZhenhua Heavy Industry Reachstacker kuphindwe kabili ngaphezu kwekhulu Ngo-Agasti 16, i- "Ngiyabonga ngokuba nawe, uhambe emgwaqeni" iZhenhua Heavy Industries amayunithi ayi-100 wokukhiqizwa kwesitaki kanye nomhlangano wokuthengisa ububanjelwe kahle. Amakhasimende, abahlinzeki, nabasabalalisi abavela kuwo wonke umhlaba bahlangane eShanghai Port Machinery Heavy Industry. UZhenhua Heavy Industry President kanye nePhini likaNobhala weKomidi Leqembu uHuang Qingfeng, kanye nePhini likaMongameli uZhang Jian babehambele umhlangano wokukhiqiza nowokuthengisa. Kusukela umkhiqizo wokuqala ususwe kulayini womhlangano ngo-Agasti 2017, isitaki seZhenhua Heavy Industry sifinyelele ukukhiqiza nokuthengisa okungaphezu kwe-100, ukuvula ngempumelelo imakethe yokusakaza yasekhaya neyamazwe omhlaba, futhi sathola udumo kubasebenzisi. Imikhiqizo yomshini wokugeleza ithengiswa kumayadi wokugcina angama-60 emazweni ayi-8 futhi inegama elihle emakethe. Emhlanganweni, i-ZPMC iphinde yethula nezimpawu zesitaki senkampani, futhi yaqhuba ukuhwebelana kwezobuchwepheshe ku-ZPMC entsha yokufinyelela isitaki nesitaki. Ababambiqhaza baphinde bavakashela indawo yomhlangano futhi bathuma indawo yemikhiqizo yomshini ogeleza waseShanghai Port, futhi bazibonela ukusebenza okuphezulu kwemikhiqizo yenkampani yokugeleza komshini khona lapho. Emakethe ye-stacker efinyelelekayo, iZhenhua Heavy Industry iyi-rookie embonini futhi izoqhubeka nokuhlinzeka amakhasimende ngezinsizakalo ezingcono futhi ezisheshayo nemikhiqizo ethembekile futhi ethuthukile.
I-crane yokuqala eyenziwe ngezifiso eChina ilethwe kumsebenzisi Muva nje, i-crane yokuqala eyenziwe ngokwezifiso ohlangothini lwasekhaya i-MQH37AYT eyenziwe ngokuzimela yinkampani yalethwa ngempumelelo kubasebenzisi. Ishintshe into ejwayelekile yokuphakamisa isitsha kwisisetshenziswa sokukhiqiza imoto yabagibeli, futhi yamukela ubuchwepheshe bochungechunge oluphakeme nangaphansi, isisekelo somhlahlandlela wezindlela ezimbili, nesilinda esislayidayo. Isakhiwo esisha nobuchwepheshe obusha, njengokuhlelwa okuhambisanayo, ukuxhumeka kwesenzo se-boom kanye ne-outrigger, kuzuze udumo olukhulu nokuqashelwa ngokusebenza kwabo okuhle kunqubo yokuhlolwa komkhiqizo.
Ama-stackers amathathu afinyelelwe athunyelwa ngempumelelo e-Weihai Port yaseShandong Port Group Ngo-Ephreli 9, ama-stackers amathathu afinyelelwe akhiqizwa yiShanghai Port Machinery Heavy Industry Co., Ltd. ngaphansi kweZhenhua Heavy Industry athunyelwa ngempumelelo e-Weihai Port yaseShandong Port Group. Mayelana neqoqo lezitaki zokufinyelela, iZhenhua Heavy Industry ithuthukise ukwakheka kwamatheminali afakwe ezimotweni, izithombe ze-panoramic ezingama-360 nokunye okulungiselelwe okuhlobene. Ngesikhathi esikhethekile, iZhenhua Heavy Industries, ngenkathi yenza umsebenzi omuhle ekuvikeleni ubhubhane, izisebenzi ezihleleke ngokushesha ukuze ziqale ukusebenza futhi ziqale ukukhiqiza, futhi zenze umsebenzi omuhle ekukhiqizeni nasekulungiseni ukulungisa imishini, futhi zagcina zikuqedile ngempumelelo ukuthunyelwa. Njengomlingani "omuhle" wezinto ezisetshenziswayo nokuhanjiswa kwezinto njengamachweba, ujantshi, namayadi wezimpahla ngobuningi, izitaki zokufinyelela zeZhenhua Heavy Imboni ziphephile, zihlakaniphile, zikhululekile, zisindisa amandla, futhi zithembeke kakhulu, zivikela kakhulu, zisebenziseka kalula, kulula gcina, njll Izici
Imikhiqizo yomshini wokugeleza we-ZPMC ingena okokuqala emakethe yaseCambodia NgoJulayi 21, 2020, ama-stackers ama-container angenalutho athunyelwa ngokushelela eSihanoukville, eCambodia, kumaka okokuqala lapho imikhiqizo yomshini wokugeleza weZhenhua Heavy ingene emakethe yaseCambodia. ISihanoukville Port, ebizwa ngeWest Port, itholakala ogwini oluseningizimu-ntshonalanga yeCambodia. Kuyitheku elikhulu kunawo wonke laseCambodia futhi ukuphela kwetheku lesimanje lezentengiselwano, itheku elingakhokhiswa ntela kanye nesango lokuhweba langaphandle. Isiqukathi seZhenhua Heavy Industry sifinyelela ama-stackers nama-stackers anezinzuzo ezinkulu njengokusebenza kahle okuphezulu, ukuphepha nokuthembeka, nokuhamba okuqinile. Banqobile ukwethenjwa kwamakhasimende asekhaya nawamanye amazwe ngohlelo lwawo oluqinile lokuphatha kanye nenethiwekhi yesevisi yezokumaketha yasekhaya neyangaphandle.
Imbobo yeCambodia Sihanoukville ifinyelela ethekwini ngokufinyelela Muva nje, ama-stackers wokufinyelela angenalutho angama-4 akhiwe yiZhenhua Heavy Industry yeSihanoukville Port eCambodia afike ethekwini ngokushelela. ISihanoukville Port, ebizwa ngeWest Port, itholakala ogwini oluseningizimu-ntshonalanga yeCambodia. Kuyitheku elikhulu kunawo wonke laseCambodia futhi ukuphela kwetheku lesimanje lezentengiselwano, itheku elingakhokhiswa ntela kanye nesango lokuhweba langaphandle. Isiqukathi seZhenhua Heavy Industry sifinyelela ama-stackers nama-stackers anezinzuzo ezinkulu njengokusebenza kahle okuphezulu, ukuphepha nokwethembeka, nokuhamba ngamandla. Kusukela umkhiqizo wokuqala ukhishwe kulayini ngo-Agasti 2017, inkampani ithengise cishe ama-200 stackers okufika kuwo, athengiswa kude. Amazwe amaningi anjengeSingapore neCambodia.
Imikhiqizo yochungechunge lweZPMC Super Reachstacker isuswe kulayini womhlangano ngokulandelana Muva nje, imikhiqizo yochungechunge lweZPMC Super Reachstacker isusiwe kulayini womhlangano ngokulandelana, ifaka amandla amasha emakethe yomshini wokusakaza. Isitaki esikhulu sokufinyelela singahlangabezana nezidingo zokudlulisa ukusebenza kahle kwamatheminali namagceke ahlukahlukene, futhi sihlakaniphile futhi siphephile. Umshini wonke usebenzisa ukuklanywa kwesisindo esincane, isisindo somshini wonke singaphansi kwamathani ayi-8 kunemodeli ejwayelekile embonini, enganciphisa kakhulu ukusetshenziswa kukaphethiloli kwemishini, inciphise ingcindezi yamasondo phansi, futhi inyuse insizakalo impilo yesayithi; ushintsho lokuqala lwemboni oluzenzakalelayo Umklamo we-wheelbase unika amandla i-wheelbase eguquguqukayo ephezulu yesitaki esikhulu sokufinyelela ukuthi ifinyelele kumamitha ayi-2,5, angenza ukusebenza ngaphansi kwezimo zokusebenza ezehlukene, anciphise kakhulu isisindo nokujika kwento yokusebenza; ifakwe isizukulwane sesithathu i-electro-hydraulic control system yeZhenhua ukubona ukusebenza kwesisabalalisi, Imisebenzi emithathu yokuxhuma ye-boom telescoping kanye ne-boom tilting ithuthukisa kakhulu ukusebenza kahle nokunemba kwesitaki sokufinyelela; ifakwe isilinda esiyinhlanganisela ingenza "ukuvuselelwa kwamandla", yonge ukusetshenziswa kwamandla, futhi inciphise izindleko zokusebenzisa eziphelele. Ngaphezu kwalokho, isitaki esikhulu sokufinyelela siguquguquka futhi sinokuhlangenwe nakho okuhle kakhulu kokushayela. Ngisho nasesimo sezulu esibi, ingakhomba kalula nangokukhalipha izithiyo futhi ibhuleke ngokuzenzakalela lapho ibuyela emuva. Umklamo weklabishi womuntu wenza indawo yokushayela ibe ntofontofo. , Ukuphepha. Ngokuzayo, isitaki esikhulu sokufinyelela sizophinde sihlonyelwe ipulatifomu yamafu ye-IoT, engenza ukuqapha isimo semoto ekude, ukuhlaziywa kwamandla, kanye nokugcinwa ngemuva kokuthengisa ukuhlinzeka amakhasimende ngezinsizakalo ezinemininingwane eminingi nezindawo futhi athuthukise imishini ukusebenza kahle. Eminyakeni yamuva nje, inkampani ikhiqize yathengisa cishe ama-200 stack stackers kanye nama-stackers angaphezu kwama-40. Ingene ngempumelelo eShanghai, eSingapore, eQingdao, eGuangzhou nakwamanye amachweba amakhulu futhi yathunyelwa emazweni angaphandle. Ngokwengezwa kwama-stackers amakhulu, imikhiqizo yomshini wokugeleza we-Zhenhua Izosiza abasebenzisi abaningi.